Dawn အကြောင်း – Dawn ဆေးခန်း
Dawn အ Aurora အသိုင်းအဝိုင်းထံမှမရှိသဖြင့်လူနာအစေခံလိမ့်မည်ဟုတစ်ဦး interdisciplinary ကျောင်းသား-run အခမဲ့ဆေးခန်းဖြစ်ပါသည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် Two-ခွံများမှာ: လိုအပ်ချက်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်နီးချင်းဖြစ်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေး, အ Anschutz ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျောင်းပရဝုဏ်ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းထမ်းဆောင်စဉ်များနှင့်အတူပူးပေါင်းစီကတခြားကနေသင်ယူဖို့တက္ကသိုလ်ကကော်လိုရာဒို၏ကျောင်းသားများအတွက်အခွင့်အလမ်းပေး. The clinic was created asajoint venture between the Fields Foundation and Primary Care Progress.The clinic will be open to uninsured adult patients living in Original Aurora on Tuesday evenings from 5:30 သို့ 9:00 PM. သင် Dawn ဆေးခန်းမှာမြင်စေရန်အရည်အချင်းပြည့်မီပါကဆုံးဖြတ်မှ, အကိုကြည့်ပါ အရည်အချင်းပြည့်မီ စာမျက်နှာ.
အဆိုပါ Dawn ဆေးခန်းမှာတည်ရှိပါတယ် 1445 Dayton စိန့်, aurora, CO 80010. အကြည့်ပေးပါ ဆေးခန်းနာရီနှင့်တည်နေရာ အသေးစိတ်များနှင့်လမ်းညွန်များအတွက်စာမျက်နှာ.
ဆေးပညာအကြားသင်ယူ interdisciplinary လက်တွေ့ဝန်ဆောင်မှုကိုတိုးမြှင့်, ဆေးတိုက်, အမူအကျင့်ကနျြးမာရေး, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံး, ဆေးသမားကိုလက်ထောက်နည်းပြ, သူနာပြု, ပါးစပ်တွင်း, အစောပိုင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်လေ့ကျင့်ရေးနှင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကျောင်းသားများကို.
တစ်ဦးဆန်းသစ်ဖို့ကျောင်းသားများကိုဖော်ထုတ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့ပြလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက် acute မြင့်တက်ဝယ်လိုအားပြည့်မီဖို့မူလတန်းစောင့်ရှောက်မှုလုပ်သားအင်အားထောက်ပံ့ရေးခေါင်းရင်းမှရည်မှန်းချက်နှင့်အတူဆေးဘက်အိမ်မှာစတိုင်အလေ့အကျင့်ပတ်ဝန်းကျင်.
တူညီသောရည်မှန်းချက်ကိုဦးတည်မူလတန်းစောင့်ရှောက်မှုဒြေနှင့်ကျန်းမာရေးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျောင်းသားများကိုအကြား Foster mentorship.
သူတို့ဘဝများနှင့်ရပ်ရွာဝေမျှဖို့ Aurora မြို့ခံများ Anschutz ကျောင်းသားများအတွက်တစ်ဦးဖိုရမ်တစ်ခုပေး.
မူရင်း Aurora နေထိုင်သူများအဘို့အများကြီးလိုအပ်နေအရွယ်ရောက်ပြီးသူကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု access point ကိုကယ်နှုတ်သောလူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပံ့ပိုးပေးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်.
အ UCH အဝန်းကနျြးမာရေးအတွက်ဖျောပွထားသညျ့အဓိကရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အောင်မြင်ရန်ဖို့ Anschutz ဝုဏ်ပတ်ပတ်လည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် Join အကဲဖြတ်လိုအပ်တာလဲ 2013 အကောင်အထည်ဖော်ရေးစီမံချက်.
- ဒေါက်တာ. ဘား Lown
ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ထိုသွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး အဘယ်သူမျှမထိခိုက်နစ်နာမှု Project website ကိုလုပ်ပါ ကော်လိုရာဒိုတက္ကသိုလ်မှ.
အဆိုပါတက္ကသိုလ်ကကော်လိုရာဒို၏ Anschutz ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျောင်းပရဝုဏ်ကော်လိုရာဒိုရဲ့အများဆုံးစီးပွားရေးအရစိန်ခေါ်နှင့် underserved ဒေသများတစျဦး၏နှလုံး၌တည်ရှိသည်. သန်းခေါင်စာရင်းခန့်မှန်းချက်အထက်သို့တစ်မရှိသဖြင့်နှုန်းကိုညွှန်ပြ 45% အ Anschutz ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျောင်းပရဝုဏ်မှချက်ချင်းကပ်လျက်ရပ်ကွက်အတွက်. ရှေ့မှာ 2013 ထိုအရပ်၌အတွက်သုညဘေးကင်းလုံခြုံမှု-ပိုက်ကွန်ကိုမူလတန်းစောင့်ရှောက်မှုဆေးခန်းတည်ရှိ 80010 စာပို့သင်္ကေတ.
ကော်လိုရာဒိုတက္ကသိုလ် 2013 ရပ်ရွာကျန်းမာရေးအကဲဖြတ်လိုအပ်တာလဲ (CHNA) ဂရုစိုက်ဖို့ Access ကိုဖျော, စိတ်ကျန်းမာရေး, အထူးသဖြင့်ရပ်ရွာလူထုလိုအပ်ချက်တွေအဖြစ်အဝလွန်ခြင်း. အဆိုပါ CHNA အကောင်အထည်ဖော်ရေးစီမံချက်အသိုင်းအဝိုင်းပူးပေါင်းတည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်ဤလိုအပ်ချက်များဖြေရှင်းရန်ရှာကြံ, အသိုင်းအဝိုင်းစွမ်းရည်တိုးတက်လာ, နှင့်မူရင်း Aurora အတွက်ကျန်းမာရေးနှင့်ကျန်းမာတိုးတက်ကြောင်းအများပြည်သူဆိုင်ရာမူဝါဒမြှင့်တင်. ဤအကြီးစွန်းမှ, တက္ကသိုလ်အပြင်းအထန်လုပ်ဆောင်စေတော်မူပြီ, MCPN အတွက်အတူပူးပေါင်း 2013 စောစော 2014, Program ကိုဂရုစိုက်ဖို့ဒုက္ခသည်ကျန်းမာရေးစင်တာနှင့် Bridges ထောက်ခံ. ဤရွေ့ကားအားထုတ်မှု Medicaid ကိုအာမခံနှင့်အတူအထူးသဖြင့်လူဦးရေအဘို့အစောင့်ရှောက်မှုလက်လှမ်းတိုးတက်လာဖို့စတင်နေပြီ. သို့သော်, အဲဒီမှာနေဆဲမတတ်နိုင်စောင့်ရှောက်မှုအက်ဥပဒေရဲ့တစ်ဦးချင်းစီလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာမှခြွင်းချက်တစ်ခုအရေအတွက်တည်ရှိခြင်းနှင့်မရှိသဖြင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဆဲမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အခက်အခဲမူလတန်းစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော.
တက္ကသိုလ်ကကော်လိုရာဒိုကျောင်းရဲ့ဆေးပညာ၏စစ်တမ်းဒေတာကြောင့်ကျော်ဆိုတာကိုပြသ 50% of third-year medical students alone are interested in either primary care, underserved ဆေးဝါး, သို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံး. ကျွန်ုပ်တို့၏ဆေးခန်းစုစည်းဖို့ကျောင်းသားပူးပေါင်းကျွန်တော်တို့ကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက်အကျိုးစီးပွား Self-ကြေညာဒေသများသို့အဓိပ္ပါယ်ရှိသောထိတွေ့ခြင်းပေးထား, ကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့် Access အတွက်ပြည်တွင်းနှင့်အမျိုးသားပြန်လည်ကျွမ်းကျင်သူများအားဖြင့်ကြွယ်ဝပြည့်စုံ.
It has been over 10 Javad မာရှယ်-Field များနှင့်သူ၏ Finance Vivian Wolf ခဲ့ကြကတည်းကအနှစ် ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကအသတ်ခံရ ဇွန်လအပေါ် Aurora အတွက် Dayton Street မှာကားမောင်းနေစဉ် 20, 2005. အဆိုပါနှစ်ဦးကော်လိုရာဒိုပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့ရတစ်ဦးမယ့်လူသတ်မှုရုံးတင်စစ်ဆေးအတွက်သက်သေခံမှ Javad ကာကွယ်တားဆီးဖို့ကြိုးစားနေရာဇဝတ်ကောင်များကချုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြ (ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ ထိုအဖြစ်အပျက်၏သတင်းလွှမ်းခြုံဖတ်ဖို့).
On Sunday, မတ်လ 1, 2015, အ Dayton လမ်းအခွင့်အလမ်းစင်တာ officially opened its doors with the goal of preventing tragedies like that which claimed the lives of Javad Marshall-Fields and Vivian Wolfe on the same street nearly 10 နှစ်မရောက်မှီ.
During the trial for Javad and Vivian’s murder, it was revealed that the perpetrators had dropped out of high school, ဒုတိယသို့မဟုတ်တတိယမျိုးဆက်မိသားစုအဖွဲ့ဝင်အကျဉ်းနှင့်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ကန့်သတ်အခွင့်အလမ်းများကိုခဲ့ခံရဖို့ခဲ့ကြ. အ Dayton လမ်းအခွင့်အလမ်းစင်တာများ၏ရည်မှန်းချက်ဤကဲ့သို့သောအကြောင်းရင်းများကိုလျှော့ချနှင့်လူငယ်များပိုမိုအခွင့်အလမ်းများဖန်တီးပေးရန်ဖြစ်ပါသည်, families, and children in Aurora who might otherwise turn toalife of crime.
သူတို့ရဲ့ကြေကွဲဖွယ်ဆုံးရှုံးမှုအောက်ပါ, Javad နှင့်ဗီဗီယန်၏မိခင် - Rhonda Fields နှင့်ခရစ္စ Wolf - Fields '' အိမ်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသားကောင်စည်းရုံးရေးလုပ်သူတို့၏ shared အလိုဆန္ဒကိုဆှေးနှေး, လူမှုရေးတရားမျှတမှုကို, နှင့်ပညာရေးဟာရပ်ရွာဦးစားပေး. သူတို့ဟာဖန်တီး လယ်ကွင်း Wolf သတိရအောက်မေ့ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ မှသုည၏အသက်အရွယ်ကနေကလေးအားလုံးသေချာစေရန် 24 မျှတသောများ, လုံခွုံသော, ကျန်းမာသော, ဦးခေါင်းကလူကြီးတစ်ဦးအောင်မြင်သောကျမ်းပိုဒ်ဆီသို့စတင်. လယ်ကွင်းကတည်းက non-အမြတ်အစွန်းကဖန်တီးထားပါတယ် လယ်ကွင်းဖောင်ဒေးရှင်း နှင့်အဖြစ်ကော်လိုရာဒိုပြည်နယ်ဥပဒေပြုလွှတ်တော်အတွက်အစေခံပြေး အိမ်ခရိုင်များအတွက်ကိုယ်စားလှယ် 42.
တွင် 2012, Aurora ရဲ့ကလေးများနှင့်လူငယ်များအတွက်အကူအညီနှင့်အခွင့်အလမ်းများကိုပေးသည့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုအတွက်, ထို Field များဖောင်ဒေးရှင်း Aurora ရဲ့သားသမီး Academic ရုန်းကန်နှင့်ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းလူမှုရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အန္တရာယ်အချက်များများအလုံးအရင်းဖြေရှင်းရန်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လူထုမိတ်ဖက်စုဆောင်းဖို့စတင်ခဲ့, အန္တရာယ်များအပြုအမူတွေ. This effort led to the creation of the Dayton လမ်းအခွင့်အလမ်းစင်တာ which officially opened on March 1, 2015.
© 2019 Dawn ဆေးခန်း | မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး